အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ Home | 24 Naryee
အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ / 1 - 12 ၏ 33 စာရင်းပြုစုခြင်း
SETTEE SF-BO6L Size (L x W x H)ft 4'2" x 2'1" x 1'4" စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၂၄နာရီတွင် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်…. ဈေးနှုန်းလေးတွေက သက်သာလို့ ဖုန်းလေးဆက်ပြီး အသေးစိတ် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်! Ph:09456315508,09456315509
362000.00 Kyat Ks
Angel (Special Edition 5in1)
အဆင့်မြင့် ဥရောပနည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်း။သယ်ယူရခက်ခဲသော တိုက်ခန်း လှေကားကျဉ်းများတွင် အပေါ်ယံလွှာကို အလွယ်တကူဖြုတ်ပြီး မွေ့ရာ၁ခု မှ ၁ခုဖြုတ်ပြီး သယ်ယူနိုင်ခြင်း။စပရင်တစ်ဖတ်ဖျော့ တစ်ဖက်အမာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။၂ယောက်အိပ် မွေ့ရာအပြင် ၁ယော...
757000.00 Kyat Ks
Therapedic Spring Mattress
Darling Brand(Made in Thailand)Prime Minister Export Award Brandလှပသေသပ်သော ရွှေရောင်အနားကွပ်လေးများဖြင့် Design ဆင်ထားခြင်း၊ အပေါ်ယံအလွှာ Pillow Top (၂)ထပ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်း။၁၂လက်မထု အထူရှိခြင်း။အရည်အသွေးမြင့် Darking Spring နည်းပညာ အသုံးပြုထားခြင်...
982000.00 Kyat Ks
Ultrafirm Pocket Spring Mattress
Darling Brand(Made in Thailand)Prime Minister Export Award Brandစပရင်ပေါင်း ၃၉၆၀ကို တစ်ခုချင်းစီအိတ်လေးများနှင့် ထည့်ထားသောကြောင့် စပရင်များအားလုံး အတွဲလိုက်မဟုတ်ဘဲ သီးခြားစီရပ်တည်နေသောကြောင့် တစ်ဦးအိပ်ပျော်နေစဉ် နောက်တစ်ဦးဝင်လာအိပ်ပါက အရင်အိပ်ပျော...
658500.00 Kyat Ks
Back Care Spring Mattress
Darling Brand(Made in Thailand)Prime Minister Export Award Brandမွေ့ရာအမာနှစ်သက်သူများအတွက် အရိုးအဆစ်ကု ဆရာဝန်များ၏ အကြံပြုချက်များ ၊ ထောက်ခံချက်များ အပြည့်အဝရရှိထားသောမွေ့ရာ
173000.00 Kyat Ks
Butterfly Comfort Floding
၁. နေရာကျဉ်းပြီး သယ်ယူရခက်သော တိုက်ခန်းများအတွက် ခေါက်ချိုးနိုင်သော စရိန်မွေ့ရာ။
175000.00 Kyat Ks
ISO လက်မှတ်ရကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုပြီး မီးပွားမကူးသော Fire - Guard စနစ်ပါ အရည်အသွေးမြင့် ပိတ်စအသုံးပြုထားသော ဟိုတယ်သုံးအဆင့်မြင့် စပရင်မွေ့ရာနှင့် ကျွန်း ၊ သစ်မာသားနှင့် ငါးထပ်သားပေါင်းစပ်ပြီး ပိုမိုခိုင်ခန့်အောင် ထုတ်လုပ်ထားသော အောက်ခံ Divan ဟိုတ...